Ibsa Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa Haala Yeroo Irratti Miidiyaaleef Kenne - ETHIOPIANS TODAY
Ibsa Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa Haala Yeroo Irratti Miidiyaaleef Kenne
Uummanni Oromoo, Sabaafi Sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan hedduun ba’uun deeggarsa hooggansa Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahimadiif qabaniifi Paartii Badhaadhinaaf deeggarsa qaban agarsiisaniiru.
Uummanni keenya akkuma qabsaa’aa ture sochii humna juntaa ijibbaata falmachuun jeequmsa garagaraa to’achuufi dhaabsisuu danda’eera.
Kanaafi dhaadannoo Fulbana 30 Mootummaan hin jiru jedhamaa ture, shororkeessummaa yeroo ayyaanaalee garagaraatti qindaa’aa turan fashaleessuun danda’ameera.
Dirree diimokiraasii babal’isuuf taasifame warreen fayyadamanii karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuu dhama’aa turan. Kanaafi ajandaa gara garaa uumuun sabaafi sablammoota walitti buusuuf yalamaa ture. Kun bilchina hooggansaafi amanamummaa uummata keenyaan fashalaa’uu danda’eera.
Humni Juntaa gantummaa RIB raawwate balaaleffachuufi qabsoo gaggeeffamaa ture injifachuuf hirmaannaan uummata Oromoo bal’aa ture.
Karoorri hidha guddicha Abbayyaa akka milkaa’uuf uummanni deeggarsa karaa gara garaa taasisaa tureera. Ammas itti fufeera. Ammas uummanni dhiibbaa tokko malee karaa ofii yaadeen yaadasaa ibsachuufi deeggaruuf baheera. Kanaanis injifannoo RIB argamsiisef galateeffachuu, hooggansa kana milkeesse tumsuu, jijjiiramni kun deeggarsa uummataa akka qabu agarsiisuuf akka ta’e uummanni ibsachaa ture.
Dabalataan yaanni finxaaleassummaa biyya salphisuu faayidaa kan hin qabne ta’uun akka beekamu taasiseera. Sagaleen xixiqqaa waliin jireenya waloo balaarra buusuu danda’an kan dhagahaman dhaabbachuu akka qaban hawaasni ejjennoosaa agarsiiseera.
Obbolummaan, jaalalli sabaafi sablammummaa akka cimuuf gatii kan kafalu tahuu hawaasni ibseera. Federaalizimiin dhugaa akka mirkanaa’uuf bu’uurri yaada kana ta’uu agarsiiseera.
Jijjiirama wareegamaan dhufe tiksuuf uummanni gatii barbaachisaa ta’e baasuuf qophii ta’uu ifattii agarsiiseeraa jedhan Itti Gaafatamaan Waajira Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa. Kanaafis Paartiin Badhaadhinaa Uummata bal’aa kana ni galateeffatas jedhan.
Ministry winds up Seminar on Foreign Policy to members of #HPR of #Ethiopia
Meeshaa buusuu fi fe’uuf warreen gatii humnaa ol gaaftan irratti tarkaanfii fudhatamuufi jedhame